Ciidamada dowlada iyo kuwa Alshabaab oo ku dagaalamay Qoryooley • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Ciidamada dowlada iyo kuwa Alshabaab oo ku dagaalamay Qoryooley
February 17, 2019 - By: Mohamed Jeenyo
Ururka Alshabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ay ciidanka dowlada ku leeyihiin degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha hoose.
Weerarka kadib waxaa xigay dagaal kooban oo dhex maray ciidanka dowlada iyo Alshabaabkii weeraray degmada Qoryooley iyadoona ay soo baxayaan warar kala duwan oo ku aadan khasaare soo kala gaaray dhinacyada uu dagalku dhex maray.
Masuuliyiinta degmada uu weerarku ka dhacay ee Qoryooley ayaa beeniyay in wax khasaare ah uu kasoo gaaray dagaalka dhex maray iyaga iyo Alshabaab xili saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta gudaha a warinaysay in dagaalka ay ku dhaawacmeen masuuliyiin iyo saraakiil ka tirsan maamulka degmada Qoryooley.
Ilaa hada ma jiro war rasmi ah oo ku aadan khasaaraha kala gaaray dhinacyadan uu dagaalka koobani ku dhex maray degmada Qoryooley inkastoo masuuliyiinta maamulka Koonfur galbeed ugu magacaaban degmadan ay sheegeen in ciidamada ay baacsadeen Alshabaabkii weerarka kusoo qaaday Qoryooley sida uu sheegay taliyaha degmadaasi.
Alshabaab ayaa dhowrjeer oo hore warar ceynkan oo kale ah ku qaaday saldhigyada ay ciidanka dowlada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha hoose iyo deegaanada kale ee ay gacanta ku hayaan ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM.